Wararkii ugu dambeeyay ee colaadda dalka Itoobiya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay ee colaadda dalka Itoobiya
Wararkii ugu dambeeyay ee colaadda dalka Itoobiya
Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsna Geeska Afrika ahna Madaxweynihii hore ee dalka Nigeria, Olusegun Obasanjo ayaa Axaddii booqasho ku tagay Gobolka Tigray, isgaoo madaxda gobolkaas kala hadlay colaadda sii baahaysa ee ka taagan dalkaasi.
Saraakiisha Tigrayga waxay sheegeen in wada hadaladu ay miro-dhal ahaayeen, ayna soo dhaweynayaan booqashada uu ergaygaasi ugu yimid.
Magaalada Addis Ababa waxaa ka taagan baqdin laga qabo in jabhadda TPLF iyo xulufadooda ay sii wadaan tallaabada ay ugu sii dhawaanayaan magaaladaasi iyo damacooda ah inay xilka ka tuuraan Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Getachew Reda, Afhayeenka TPLF ayaa Wakaaladda Wararka ee AFP u sheegay inay suurtagal tahay in ay ku sii siqaan magaalo madaxda dalkaasi ee Addis Ababa.
Afhayeenka ayaa wax laga badbadiyay ku sheegay in dadka reer Addis Ababa ay si weyn uga soo horjeedaan jabhadda TPLF.
“Sheekada ku saabsan in dadweynaha reer Addis Ababa, ay si weyn nooga soo horjeedaan waa mid laga badbadiyay.” Ayuu yiri Afhayeenka Tigrayga.
Getachew Reda ayaa ku waramaya in Caasimadda Addis Ababa ay tahay barta kulmisa dadweynaha Itoobiya, isla-markaana ay ku nool yihiin sida uu yiri dad badan oo kala danno iyo aragti duwan.
Reda ayaa xusay in TPLF ay xukunka dalkaasi haysay 1991-2018, isaga oo intaa ku daray inaanay doonayn in mar kale ay talada dalkaasi la wareegto.
Tan iyo Axaddii ayaa mashquul badani laga dareemaya Garoonka Diyaaradaha Bole ee Magaalada Addis Ababa, ka dib markii wadamada shisheeye ay bilaabeen in diblomaasiyiintooda iyo shaqaalahooduba kala baxaan dalkaasi.
Previous articleAxmed Madoobe oo kulan la yeeshay Safiirka Denmark ee dalka
Next articleCagjar oo sheegay in quwado shisheey ku hardamayaan Itoobiya